Kenya oo amartay in 14 maalmood guduhood lagu xiro xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma! - Awdinle Online
Kenya oo amartay in 14 maalmood guduhood lagu xiro xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma!
Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma ayaa waxaa ku sugan kumanaan qaxooti Soomaali ah, kuwaas oo ka cararay colaadaha Sokeeye ee kajiray Soomaaliya, waxaana la ogeyn qorshaha ay Kenya ka damacsan tahay arrintaan.
ha’yadda Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayaan weli ka jawaabin dalabka dowladda Kenya ee ku aadan in la keeno qorsho lagu xirayo xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma.
Dowladaha Soomaaliya & Kenya ayaa waxaa xilligan ka dhaxeeya khlaafka badankiisa salka ku haaya dacwadda Badda, taas oo keentay in dowladda Soomaaliya ay xiriirka diblumaasiyadeed u jarto Kenya.
Previous articleQaraxyo lala eegtay Ciidamo ka tirsan AMISOM & khasaaro ka dhashay
Next articleBooliska Soomaaliya oo 30 qof u xiray dhaca Mobeelada